ဒီဇင်ဘာလ 11, 2018 Denial245
192.168.0.0 ip address ကို
IP ကိုအင်တာနက် protocol ကိုအတိုကောက်. တိုင်းကွန်ယက်ကိုတစ်မူထူးခြားတဲ့အိုင်ပီလိပ်စာရှိပါတယ်. IP လိပ်စာ၏အကွာအဝေး 192.168.255.255. IP လိပ်စာများတစ်အကွာအဝေးပါရှိသည်, အကွာအဝေးအတွင်းပထမဦးဆုံးအရေအတွက်ကရိုးရိုးကွန်ယက်ကို. တူညီသော IP address ကိုကွဲပြားခြားနားသော device များတူညီကွန်ယက်တွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြု.
subnet သုံးဝန်ဆောင်မှု IP လိပ်စာများရှိပါတယ်:
သည် subnet အိုင်ပီ,
က default gateway ဟာအိုင်ပီ.
192.168.0.0 ဤကိစ္စတွင်တစ်ဦးသည် subnet IP လိပ်စာဖြစ်ပါသည်.
ပုံမှန်အားဖြင့်အများဆုံးပစ္စည်းတွေမသုံးပါ 192.168.0.0 ကအထူးသဖြင့်ကွန်ရက်မှာ IP လိပ်စာအတိုင်း admin ရဲ့ assign ဖို့ကြိုးစားပါတယ်လျှင်အသုံးပြုသည်တစ်ချိန်ကကြောင့်အိုင်ပီလိပ်စာအဖြစ် 192.168.00 အငြိမ် IP လိပ်စာအတိုင်းကွန်ယက်ပေါ်တွင်မည်သည့်ကိရိယာ, device ကို detach လုပ်လိုက်သောသည်အထိတစ်ခုလုံးကိုကွန်ယက်ကိုပိတ်ပစ်ဦးမည်.
သီအိုရီ, 192.168.0.0 တိကျသောကိရိယာပေးထားနိုင်ပါတယ်, ဒါဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့လိပ်စာအကွာအဝေးရှိပါတယ်လျှင်. အဲဒီသုညနှင့်အတူအဆုံးသတ်အိုင်ပီလိပ်စာနှင့်အတူ devices တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးမနေကြရတဲ့အကြောင်းရင်းင်.
အဆိုပါ၏အရွယ်အစား 192.168.0.0 ကွန်ယက်ကိုရွေးကောက်တော်မူသည်ရွေးချယ်ထားသောကွန်ယက်ကိုမျက်နှာဖုံးပေါ်တွင်မူတည်သည်.
ရှိပါတယ်3အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြခဲ့တဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအကွာအဝေး:
168.0.0/16: ကနေလာနေကြပါတယ် 192.168.0.0 သို့ 192.168.255.255 ပတ်ပတ်လည်နှင့်အတူ 65,534 ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်.
168.0.0/18: ကနေလာနေကြပါတယ် 192.168.0.0 သို့ 192.168.63.255 ပတ်ပတ်လည်နှင့်အတူ 16,382 ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်.
168.0.0/24: ကနေလာနေကြပါတယ် 192.168.0.0 သို့ 192.168.0.255 ပတ်ပတ်လည်နှင့်အတူ 254 ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်.
အပေါ်အိမ်ကပြေးမှာအသုံးပြုတဲ့ဘရော့ဘန်း router များ 192.168.0.0 ကွန်ယက်ကိုပုံမှန်ရှိ 192.168.0.0/24 သူတို့ရဲ့ configuration များအဖြစ်, ကြောင်းအားဖြင့်သာငါသူတို့လေ့အသုံးပြုဆိုလို 192.168.0.1 ၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာတံခါးပေါက်လိပ်စာအဖြစ်.
ဘယ်လိုလဲ 192.168.0.0 အလုပ်များ?
အဆိုပါဒဿမ notation binary numbers များကိုထံမှလူသားတစ်ဦး-ဖတ်လို့ရအောင်ပုံစံသို့ကူးပြောင်းနေကြသည်. တူ binary ရူပ (11000000 10101000 00000000 00000000).
ping စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်အင်တာနက်ကနေအခြားအဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိက IPv4 ကွန်ယက်ကိုလိပ်စာတခြားပြင်ပမှာကွန်ရက်များကရှုံးရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး.
ငါ assign နိုင်သလား 192.168.0.0 ငါ၏အကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သို့မဟုတ် Laptop ကိုတစ်ကွန်ယက်ကိုကဒ်?
အဘယ်သူမျှမ! You can’t assign this address to any network device (ပင်သင့် router မှ) ဤအမှု၌သင်၏ကွန်ယက်ဆိုးဆိုးရွားရွားတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်စေခြင်းငှါသငျတို့သအမျိုးမျိုးသောကွန်ယက်ကို-related ပြဿနာတွေရှာတွေ့ခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်. အနီးဆုံးဥပမာ: your device may be not accessible over the LAN (local area network).
ငါကအကြောင်းကိုအလုံအလောက်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သင့်စဉ်းစား 192.168.0.0 IP Address ကိုပုံမှန် Router အသုံးပြုသူအမည် & Password ကို. သင်ဤ post ကိုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါလျှင်သင်တို့အားငါသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအသုံးဝင်သောမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့, ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ယခင် Post မှ:ဘယ်လိုသုံးစွဲနည်း 192.168.0.1 IP ကို ​​Router ဝင်မည်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေး
next Post:192.168.1.254 router ဝင်မည်